Ukuphakama nokuwa kwe-Weimar kunye nokuphakama kukaHitler
I-Interwar eJamani: Ukunyuka nokuwa kwe-Weimar kunye nokuphakama kukaHitler
Phakathi kweMfazwe Yehlabathi enye kunye neBili, iJamani yabona utshintsho oluninzi kurhulumente: ukusuka kumlawuli ukuya kwidemokhrasi ekuphakameni komlawuli omtsha, uFührer. Enyanisweni, yile nkokheli yokugqibela, uAdolf Hitler , oqalise ngokuthe ngqo kwinqanaba elinesibini leminyaka yeenkulungwane ezinkulu. Umbuzo wendlela uHitler athatha ngayo igunya udla ngokubambisana nendlela idemokhrasi eJamani ehlulekile ngayo, kwaye ezi zilandelayo zilandelayo zilandelele 'kwi-revolution' ka-1918 ukuya kuma-30s, xa uHitler engenakufumaneka.
Ukuguqulwa kweJamani ka-1918-19
Ejongene nokutshatyalaliswa kweMfazwe Yehlabathi Lokuqala, iinkokeli zempi zase-Imperial zaseJamani ziqinisekisile ukuba urhulumente omtsha uza kwenza izinto ezimbini: ukubeka ityala lokulahleka, kunye nokukhuthaza ukuba kungekudala abaphumelele kwimfazwe bafune ukuhlawulwa . I-SDP ye-socialist yamenywa ukuba iqulunqe urhulumente kwaye iqhube ikhosi ephakathi, kodwa njengoko iJamani yaqala ukuphazamiseka phantsi kwengcinezelo, kufuneka ukuba iinguqulelo ezipheleleyo zifunwa yi-left far away. Ingaba iJamani ingaba ne-revolution ngowe-1918-19, nokuba ingaba yatshatyalaliswa (kunye neyiphi iJamani eyayifumana ukuba yi-democracy) ixutyushwa.
Ukudala nokulwa kweRiphablikhi ye-Weimar
I-SDP yayisebenza eJamani, kwaye isisombululo sokudala umgaqo-siseko kunye neeriphabliki. Oku kwadalwa ngokusemthethweni, kusekelwe kwi-Weimar kuba iimeko zaseBerlin zazingakhuselekanga, kodwa iingxaki zeemfuno zabadibaniselwano kwiSivumelwano saseVersailles zivelise indlela ekhohlakeleyo, eyona yanda kakhulu ekuqaleni kwee-1920 njengoko ukuhlaziywa kuncedisa ukuxhatshazwa kwemvelo kunye nokuwa kwezoqoqosho.
Sekunjalo u-Weimar, kunye nenkqubo yezopolitiko evelise ukusebenzisana emva kokubambisana, esaphila, kwaye yafumana i-Golden Age yamasiko.
Imvelaphi kaHitler kunye neNazi yamaNazi
Kwiingxabano emva kokuphela kweMfazwe yeMfazwe yokuqala, kwavela amaqela amaninzi eJamani. Omnye waphenywa ngumntu wempi ogama linguHitler.
Wajoyina, wabonisa italente yokuxhamla, kwaye kungekudala wathatha iNational Party waza wandisa ubulungu bayo. Kusenokwenzeka ukuba wayefudule kakhulu ekholelwa kwiBer Hall Hall Putsch yayiza kusebenza, nokuba neLudendorff kwicala, kodwa yayingakwazi ukuphendula ityala kunye nexesha elithile entolongweni. Ngomnyaka wamashumi amabini anesibini, wayedulululula ubuncinane ukuqala ukuphakama kwakhe kumandla ngokusemthethweni.
Ukuwa kwe-Weimar kunye noHitler Ukuphakama kwamandla
I-Golden Age ye-Weimar yenkcubeko; uqoqosho lwaluxhomekeke engozini kwimali yaseMerika, kwaye inkqubo yezopolitiko yayingaqinisekanga. Xa ukuCaluleka OkuKhulu kwasusa imali yase-US uqoqosho lwaseJamani lwalukhubazekile, kwaye ukunganeliseki ngamaqela asemaphandleni kwakhokelela ekugqithiseni njengamaNazi akhula ngamavoti. Ngoku inqanaba eliphezulu lezopolitiko zaseJamani liye laya kumlawuli olawulayo, kwaye idemokhrasi yahluleka, konke ngaphambi kokuba uHitler akwazi ukuxhaphaza ubudlova, ukuphelelwa yithemba, ukwesaba kunye neenkokheli zezopolitiko ezazimnyanzela ukuba nguKhansela.
Ngaba iSivumelwano se-Versailles Aid Hitler?
ISivumelwano saseVersailles sasisigxina ngokukhokela ngqo kwiMfazwe Yehlabathi yesiBini, kodwa ngoku kuthethwa ngokugqithiseleyo. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuxubusha imiba emininzi yeSivumelwano senze igalelo ekuphumeni kukaHitler kumandla.
Ukudalwa kolawulo lwamaNazi
Ngo-1933 uHitler wayengumKhansela waseJamani , kodwa wayekude ekhuselekile; kwi-theory, uMongameli uHindenburg wayengamkhangela xa wayefuna. Kwiinyanga ezimbalwa wadibanisa umgaqo-siseko waza wasungula ubuqili obunamandla, obunobuncwane ngenxa yobundlobongela kunye nesenzo sokugqibela sokuzibulala kwezopolitiko kumaqela aphikisayo. IHindenburg yafa ke, kwaye uHitler wadibanisa umsebenzi wakhe kunye noongameli ukuba enze uFührer. UHitler ubuya kuphinda abuyele yonke indawo yobomi baseJamani.
Ixesha leSibini leParic War Timeline
I-Biography ye-Attila i-Hun
UJoan waseArc: I-Leader Leader okanye iPop Puppet?
I-Ohio Valley University Admissions
Indlela yokwenza iiPalati zePainted kunye neRocks
Indlela yokufaka i-Visual C ++ 2010 Express
Abangcwele Abafazi: Oogqirha Oogqirha beCawa
I-13 Dalai Lama Ukususela ngo-1876 ukuya ku-1912
AmaYuda ahlamba izandla
Iingqungquthela zaseLatin Love Elegy
Isicwangciso esisisiseko seN Blackjack
Iimpawu zeAradaid Era - Ulwahlulo lwaBantu eMzantsi Afrika
I-PHP kunye ne-MySQL Poll
Yintoni enokuyenza ukuba uRhulumente uvakalise ukuba ufile
Imfazwe Yehlabathi II: iBoeing B-29 Superfortress
Vanessa L. Williams 'Top Ten Hits
Izinto ezinobungozi ezingenazo Ixabiso lentlawulo